Iimveliso zombane zisetyenziswa kuzo zonke iinkalo zobomi, kwaye uninzi lwezi mveliso ze-elektroniki kufuneka zigqunywe ngaphambi kokuba zibekwe kwintengiso. Kule mihla, izixhobo ezincamathelayo zokucoca kusetyenziswa kumatshini wokutsala umatshini wemagnetron. Apha, size Sijonge iithagethi ezisetyenzisiweyo ekujongeni, izinto ekujoliswe kuthi esizisebenzisayo akukho ngaphezu kweentlobo ezintathu: iithagethi zentsimbi, ingxubevange ekujoliswe kuyo, kunye nezinto ekujoliswe kuzo..
Zininzi iithagethi ezisetyenziswe kwiidiski ezinzima. Iifilimu ezininzi ezinoqweqwe zifakwe kumgangatho wokurekhoda. Ifilimu nganye inomsebenzi wayo. Kwinqanaba elisezantsi, 40I-nm eshinyeneyo i-chromium okanye i-chromium alloy iya kufakwa kumxube wokudibanisa kunye nokumelana nomhlwa. , Kwaye yatyatyekwe nge-15nm ubukhulu be-cobalt chromium alloy embindini, emva koko yatyatyekwe nge-35nm ubukhulu be-cobalt alloy, njengesixhobo semagnethi, Le nto ingabonisa ngokupheleleyo iimpawu zemagnethi kunye nokuphazamiseka okuphantsi, kwaye ekugqibeleni yatyatyekiswa ngefilimu ye-carbon eyi-15nm.
Ukujongwa kokujongwa kwentloko kazibuthe kusetyenziswa isinyithi-nickel alloy, kwaye ezinye izinto ezimbaxa zongezwa kamva, ezifana ne-nitride yentsimbi, i-iron tantalum nitride, i-nitride yentsimbi, njl., Zonke ezo zinto zikumgangatho ophezulu ekujolise kuwo kwimifanekiso ye-dielectric yefilimu.
Iidiski zeCD ziya kusebenzisa ifilimu yealuminium njengomaleko obonakalisayo oza kutyabeka kwimisebenzi yeplastiki, kodwa CDROM kunye DVDROM akwazi, Ifilimu yealuminium ayinakusetyenziswa, kuba kuya kubakho umaleko wedayi kwezi diski, kwaye into ekwi-Aluminium yonakalise kwinqanaba elithile, kwaye ihlala ithathelwa indawo yigolide okanye ifilimu yesilivere.
Uluhlu lwefilimu yediski ye-optical nayo inamalungu amaninzi. Yambathiswe nge-30nm ubukhulu be-iron-cobalt alloy umaleko wokurekhoda kumaleko wedayi, exutywe nezinto ezinqabileyo zotshintsho lomhlaba, emva koko yambathiswe nge 20 ukuya kwi-100nm ubukhulu be-nitride dielectric layer. Ekugqibeleni wawutyabeka ngealuminium ebonakalayo.
Ezi mveliso zekhompyuter zifuna ukufezekisa iipropathi zemagneti kwaye zinokurekhoda idatha, ukufezekisa le misebenzi, usafuna ukuxhomekeka kwifilimu efafazwe zizinto ezahlukeneyo, kunye nokulandelelana kwekristale okubonisiweyo emva kokuba ifilimu yenziwe..
Prev: Uyilungisa njani into ekujoliswe kuyo
Next: Izinto eziluncedo zezinto ekujoliswe kuzo ezikumgangatho ophezulu wokujikeleza kwemiphunga kunye neeplanethi